အနိမ့်နှင့်အထက်စွန်အဖျားရှိ Polyneuropathy - ပျက်စီးသွားသောအာရုံကြောအဆုံးများကိုကုသနည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ
Kefir Glycemic အညွှန်းကိန်း
Oddi ၏ sphincter ၏ချောင်းဆိုး၏ကုသမှု
အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအတွက်မျိုးဆက်သစ်ဆေးများ - ဆေးဝါးစာရင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ
ဆီးချိုရောဂါအတွက် Ingavirin - ဆီးချိုရောဂါအတွက်ဆေးကိုသောက်လို့ရနိုင်မလား။
ဆီးချိုရောဂါ2fructose cookies တွေကိုအမျိုးအစား
အင်ဆူလင်ကိုအရေပြားအောက်စီဂျင်နည်းစနစ် - နည်းဥပဒေများ၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ ဆေးထိုးသည့်နေရာများ
Dialay - ဝယ်သူနှင့်ဆရာ ၀ န်၏သုံးသပ်ချက်များ
မူးယစ်ဆေးဝါးအတွက် Ginkgo Biloba VIS ဖော်ပြချက်နှင့်စျေးနှုန်းအတွက်ညွှန်ကြားချက်များ
Dialock ဆီးချိုရောဂါကုသမှု: ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လျှောက်လွှာ၏နည်းလမ်း
Dialock - ဆီးချိုရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဝေဒနာခံစားနေရသောလူနာများအနက်မှဆီးချိုရောဂါတစ်ခုသို့ရောင်စုံကြော်ငြာတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ရောဂါတစ်မျိုးသည်မပျောက်ကင်းနိုင်ပါ၊ အဆက်မပြတ်ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်ခြင်းများစွာလိုအပ်သည်။ ...
Klinutren Optimum: အသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဆီးချိုရောဂါများအတွက် Lilac ပန်းပွင့်
Lilac buds - ဆီးချိုရောဂါအတွက်သဘာဝဆေးတစ်လက် Lilac ဟာပန်းပွင့်တွေအများကြီးနဲ့မတူထူးခြားလှတဲ့အပင်တစ်ပင်ဖြစ်တယ်။ နွေ ဦး ရာသီတွင်နွေရာသီနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်နွေရာသီအစောပိုင်းတွင်ပွင့်လန်းပြီး ၃ ပတ်ခန့်ကြာပွင့်ပါသည်။ ...
အသည်း metastases နှင့်အတူပန်ကရိယကင်ဆာ: ကုသမှု, ခန့်မှန်းချက်, လူမည်မျှအသက်ရှင်နေထိုင်
ပန်ကရိယရောင်ခြင်းနှင့်လက်ဖက်ရည်သောက်နိုင်ပါသလား။ လက်ဖက်ခြောက်သည်အရသာရှိသည့်အပြင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကုစားနိုင်သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသောက်စရာဖြစ်သည်ကိုမသိသူမည်သူမျှမရှိပါ။ ...
Aspen သည်ဆီးချိုရောဂါနှင့်ယင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဟန့်တားခြင်း - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ၊ အသုံးပြုမှုတစ်ခုလုံးနှင့်စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း - တရားဝင်ဆေးပညာသည်ဆီးချိုရောဂါကိုရှုပ်ထွေး။ မပျောက်နိုင်သောရောဂါတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ...
Detralex - ဆီးချိုရောဂါကုသမှု
ဆီးချိုရောဂါနှင့်ဖိအား DIABETES နဲ့မအောင်မြင်တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီလား။ ဌာန၏အကြီးအကဲ -“ နေ့စဉ်သောက်ခြင်းဖြင့်ဆီးချိုရောဂါကုသရန်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုသင်အံ့အားသင့်သွားပါလိမ့်မည်။ ...
Prediabetes: သွေးသကြား: Metformin ကုသမှု
Prediabetes: သွေးသကြား၊ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့လက်ချောင်းကနေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှုန်းလူနာကိုကြိုတင်ဆီးချိုရောဂါရှိတယ်လို့သိရင်သွေးသကြားဓာတ်ပမာဏဟာ ၅.၅ ကနေ ၆.၉ ယူနစ်ရှိတယ်။ ...
20 pcs များအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ။ ထောပတ် - ၉၀ ဂရမ်သကြား - ၅၀ ဂရမ်ကြက်ဥ - ၁ ကြီးမားသောကိုကိုး - ၃ tbsp ။ ဌမုန့်ညက် -40, gr vanilla ထုတ်ယူ -1 မီတာဌ (သို့မဟုတ် vanillin တစ်ဗူး) နှင့်ပတ်သက်။ 80 ml ။ ...
Chlorhexidine မှုန်ရေမွှား: အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်များ
ဖြန့်ချိခြင်းပုံစံ INN: Chlorhexidine (Chlorhexidine) အေးဂျင့်၏ထုတ်လွှတ်မှုပုံစံသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ပြင်ပမှအသုံးပြုရန်အတွက် ၀.၀၅% သောအဖြေတစ်ခုဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ...
ချိုမြိန် - ထုတ်ကုန်၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးခေတ်သစ်စျေးကွက်သည်ချိုမြိန်စေရန်အတွက်အမျိုးမျိုးရွေးချယ်သည်။ သူတို့ကတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကနေဖြန့်ချိ, ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်၏ပုံစံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရသာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်မဟုတ်ပါ။ ...
Aspen အခေါက် - ဆီးချိုရောဂါများအတွက်မှော်ကုသ
ဆီးချိုရောဂါကိုအက်စစ်အခေါက်နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်ဆီးချိုရောဂါသည် endocrine စနစ်၏အရှုပ်ထွေးဆုံး၊ မပျောက်နိုင်သောရောဂါများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရောဂါကိုလေ့လာနေသည့်အချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ထိရောက်သောကုထုံးနည်းလမ်းများကိုသာတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းကုသခြင်းမရှိပါ။ ...
Lomflox - အသုံးပြုရန်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်ညွှန်ကြားချက်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိကူးစက်ရောဂါများနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်များတွင်ဆရာဝန်များသည် Lomflox (antibacterial drug) Lomflox (ပaိဇီဝဆေး) ကိုကျယ်ပြန့်သောလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ...
သကြားမပါသည့်နို့မှုန့် - ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများနို့ကိုအရသာမကြိုက်။ မနှစ်သက်သောသူကိုရှာရန်ခက်ခဲသည်။ ...
သိကောင်းစရာ ၁ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆီးချိုရောဂါစစ်ဆေးနည်း
ဒီဆီးချိုရောဂါဟာကမ္ဘာ့ Diabetes Day နှင့်တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ နို ၀ င်ဘာ ၁၂ ရက်မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ Moscow ရှိ polyclinics တွင်သင်ဟာဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား ၂ ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကိုအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ...
ဆီးချိုရောဂါနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း - ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲ
Pancreatitis Nutrition: ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း
ပန်ကရိယနှင့်အတူဘာစားရမည်နည်း။ ခွင့်ပြုထားသောအစားအစာစာရင်း။ အကယ်၍ ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်တွင်အရက်ကိုသုံးသောသူများသာပန်ကရိယရောဂါကိုခံစားခဲ့ရလျှင်ယနေ့တွင်၎င်းမပါဘဲလုပ်နိုင်သူများတွင်ရောဂါရှိသည်။ ...
ပန်ကရိယပန်ကရိယပြောင်းလဲခြင်း - ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ဘေကွန်နှင့်အတူကြက်ဥကြော် - အဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်နည်းများ
pobedidijabetes.org © Copyright 2020. All Rights Reserved. | ဆီးချိုရောဂါကိုအနိုင်ယူ!